एउटै बोकाको ३ लाख मुल्य ?-Setoghar
एउटै बोकाको ३ लाख मुल्य ?
सामान्यतया एउटा बोकाका मूल्य कति पर्ला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, २० देखि बढीमा ५० हजार । तर, एउटै बोकाको मूल्य ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ । त्यो कुनै सुविधामुखी सहरमा बिक्रीका लागि राखिएको होइन । उदयपुर जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र बेलका नगरपालिकाले आयोजना गरेको तीनदिने जिल्ला स्तरीय कृषि मेला प्रदर्शनीमा सोही नपाको वडा–२ का पाण्डव कार्कीले प्रदर्शनीमा राखेको वयरवन जातको बोकाको मूल्य हो ।